विज्ञ: अर्धवान्डुनिक र अन्य आपूर्ति चेनहरूको वाशिंगटन "हतियार" को वाशिंगटन "हतियार - YIC International International Co |तपाईंको इन्टरजेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आपूर्तिकर्ता |www।YIC-Electronics.com
घर > समाचार > विज्ञ: अर्धवान्डुनिक र अन्य आपूर्ति चेनहरूको वाशिंगटन "हतियार" को वाशिंगटन "हतियार
विज्ञ: अर्धवान्डुनिक र अन्य आपूर्ति चेनहरूको वाशिंगटन "हतियार" को वाशिंगटन "हतियार
संयुक्त राज्य अमेरिकाको आपूर्ति श्रृंखला समायोजित गर्न संयुक्त राज्यले प्रशासनिक आदेश जारी गरेको छ, र अर्ध मजदुरहरूको ब्यालेन्सर वा मेडिकल उत्पादनहरू, र सहयोगीहरूलाई सहयोग गर्ने चार मुख्य खरीद प्रणाली निर्माण गर्नेछ वा आपूर्ति चेन अग्रिम गर्न क्षेत्रहरू। सुदृढीकरण। यद्यपि उनीहरूले सिधै चीनलाई सीधै चीनलाई औंल्याएनन्, सबैले आईस्कीननको इरादाको अभिप्राय प्रयोग गर्न को लागी आपत्तिका श्रृंखलालाई पुनर्जीवण गर्न को लागी आपत्तिका साथ प्रयोग गर्न को लागी । निर्भरता। यो भन्नु आवश्यक छ कि यो एक असम्भव काम हो।
विश्वव्यापी उच्च-टेक उद्योग एक गोल्डेन अमूर्त अवधारणा हो, तर आपूर्ति चेन वास्तविक शारीरिक अस्तित्व हो। यद्यपि शीर्ष-डाउन राजनीतिक शक्तिहरू समयसँगै समय-समयमा हस्तक्षेप गर्दछ, उत्पादगत गुणवत्ता, लागत दक्षता, र तलबाट ग्रस्त छ। अन्तमा, अन्तराल सुविधाहरूको साथ श्रम र सहकार्य नेटवर्कको विश्वव्यापी विभाजन गठन गरिनेछ। आफ्नै प्रयासको साथ, चीन एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएको छ र नवीनता संचालित, रूपान्तरण र अपग्रेड मार्फत औद्योगिक श्रृंखलाको तल्लो अन्तदेखि तल्लो अन्तदेखि नै चढाइरहेको छ।
यद्यपि, धेरै अमेरिकीहरूले विश्वास गर्छन् कि चीन संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पार गर्न चीनको लागि स्वीकार्य छैन। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि यो विभिन्न माध्यमबाट समावेश गर्न सकिन्छ। आजको बिग्मिन प्रशासनले चीनलाई थप सहयोगी संस्थाको लक्ष्यमा पुग्न आशा गर्दैछ र आपूर्ति श्रृंखलाको क्षेत्रमा केही योगदानहरू गर्ने लक्ष्यमा पुगेको छ। पहिलो एक वैकल्पिक आपूर्ति चेन सिर्जना गर्न को लागी हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अवस्थित प्राविधिक लाभ र विश्वव्यापी शक्ति संग, प्राविधिक सम्भाव्यता संग कुनै समस्या छैन। आपूर्तिको श्रृंखला पुनर्निर्माण तीन उद्देश्यहरू भन्दा बढि छैन: एक प्रमुख प्रकोप वा ग्रोपोलिटिकल द्वन्द्व र आदानप्रदान रोक्न को लागी हो। यो "स्पेयर टायर" हो र यसको लागत-प्रभावकारितामा ध्यान दिन आवश्यक पर्दैन; अर्को भनेको आपूर्तिको समर्थन गर्न सरकारको "देखिने हात" प्रयोग गर्नु हो। खुला बजार प्रतिस्पर्धा मा यसको फाइदाहरू प्राप्त गर्न यो स्पष्ट रूपमा अव्यावहारिक छ। तेस्रो हो भविष्यमा आपूर्ति श्रृंखलाको "हतियारको लागि" को तयारी गर्न र चीनको वृद्धिलाई रोक्न "आपूर्ति श्रृंखला प्रयोग गर्नु हो। '
ट्रम्प युगको बखत एक्लै झगडाको डिट्रन्ट प्रभाव महत्वपूर्ण थिएन। के बिग्रेको प्रशासनले गिरोह र "समूह" गठन गरेर वरपर स्थिति परिवर्तन गर्न सक्छ? थप रूपमा, एकल कोर टेक्नोलोजीको प्रभाव आदर्श छैन, त्यसैले आपूर्ति श्रृंखला अधिक प्रभावकारी र शक्तिशाली "आणविक विकल्प" हो?
यस तर्क अनुसार, विश्वव्यापी आपूर्तिको चर्सले तीन चरणहरूको सामना गर्न सक्छ। पहिलो पहिलो विश्वव्यापीकरण चरण हो। विगत केही दशकहरुमा उच्च-विद्युतमा सम्पन्नता बजार संचालित आद्य निर्माण आपूर्ति चेनको भूमण्डलीकरणमा निर्भर छ, जसको लागि चीनले योगदान पुर्याएको छ। अब, यो दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ, जुन आपूर्ति चेनको राजनीतिकरण हो, र संयुक्त राज्यको राजनैतिक शक्ति सबैभन्दा ठूलो चर भएको छ। भविष्यमा, हामी तेस्रो चरणमा सतर्क हुनुपर्दछ, जुन "हतियारको श्रृंखलाको श्रृंखलाको" स्टेज हो।
आपूर्ति चेन प्रणाली लामो समय सम्म म तपाईंमा आएको हो, र तपाईं ममा हुनुहुन्छ। यसको शक्तिशाली बाह्यताको कारणले, क्वासी-सार्वजनिक सामानको विशेषताहरू छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा गेपिटलिक्सको कडा हस्तक्षेपको साथ, ठूलो अनिश्चितताको साथ इन्चार्ज गरिएको छ, जुन आपूर्ति श्रृंखलाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। महामारीको अवधिमा, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला अत्यन्तै प्रभावित भयो र विश्वव्यापी चिकित्सा र व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण छोटो आपूर्तिमा गम्भीरतापूर्वक थियो। यो प्राकृतिक प्रकोप हो। भर्खरको "कोर्स अभाव" एक मोटर निर्मित दुर्घटना "को कारण हालसालै" महिला निर्मित दुर्घटनाहरू "को कारणले गर्दा अर्धविद्को" राजनीतिकरण "र" हतियार "बाट अविश्वासी हो। अर्धन्डोक्ट्रोलकर्ता आपूर्तिको अभावले हामीलाई स्वत: कम्पनीहरू र अन्य उत्पादकहरूलाई उत्पादन काट्न बाध्य पार्दछ। केवल एक अत्यन्त केही बजार-उन्मुख ग्लोबल आपूर्ति चेन प्रणालीले वास्तवमै संयुक्त राज्य अमेरिकाको हितको सेवा गर्न सक्छ।
पछिल्ला दुई बर्षमा, अमेरिका सरकारले निरन्तर बढेको ह्युवेदीको आपूर्तिको थैलनेशन छ, जसले चीनलाई लिन सक्ने सबै चीज गर्दछ, र हामीले सावधानी अपनाउनुपर्दछ। यद्यपि हामी अमेरिकी सरकारको सबै चालको नेतृत्वमा नेतृत्व गर्नु आवश्यक पर्दैन। हामीले अझै आफैंमा राख्नुपर्दछ, एक सक्रिय रक्षा नीतिको पालना गर्न, र सान्दर्भिक रणनीतिहरू बनाउनुहोस्।
पहिलो, चीनले अरुलाई आक्रमण गर्न आफ्नो आपूर्तिको शार प्रयोग गर्दैन। चीनको बृद्धि श्रम लागत, उत्पाद प्रतिस्पर्धा र टेक्नोलोजिकल नवानिक जस्ता बजार कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। त्यसकारण, यो नवीनत बढाउने, विकास गति बढाउनको लागि दीर्घकालीन समाधान हो, र आफ्नै शक्ति सुदृढ पार्नुहोस्। विशेष गरी आदार नै। नवीनता मा अन्तर प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी सरकारको प्रतिस्थापन रणनीति को प्रभाव निर्धारित गर्दछ। हामीसँग अझै सेनीन्डरकय उपकरण, सामग्री, र निर्माणको क्षेत्रमा ठूलो अन्तर छ। यससँग डिल गर्ने उत्तम तरिका आफैलाई अझ ठूलो र बलियो बनाउनु हो, लगातार हाम्रो शक्ति सुधार गर्न, र टेक्नोलोजिकल नवनिर्ममा खाली ठाउँ खोल्नबाट जोगिन।
दोस्रो, बचाव हृदय अपरिहार्य छ। हामीले आपूर्तिको श्रृंखलाको व्यापक सर्वेक्षण गर्नुपर्दछ, समयमै अमूर्तहरूको लागि जाँच गर्न र कमजोरीहरूको लागि आपूर्ति श्रृंखलामा विभिन्न जोखिमहरू सम्बोधन गर्न र लुकेका खतराहरू हटाउनका लागि।
तेस्रो, आवश्यक काउन्टरमेसर प्रणाली स्थापना गर्नुहोस्। यदि कोहीले मलाई अपमान गर्दछ भने, म अरूलाई अपमान गर्दछु। 2020 मा, चीनले एक "अविश्वसनीय निकाय" सूची प्रणालीको स्थापना गरेको छ। विदेश मामिला मन्त्रालयले अमेरिकी कम्पनीहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने किलविकासम्बन्धी ताइवानमा र सान्दर्भिक व्यक्ति र संस्थामा ताइवानमा नराम्रो भूमिका खेल्ने काम गर्ने निर्णय गरेको छ। जापानी मिडियाले भनेझैं चीनले बाह्य शक्तिहरू द्वारा यस कर्पोरेट वा राष्ट्रिय नीतिमा अव्यवसायिक प्रयोग गर्न सक्दछ। "
आपूर्ति श्रृंखला मुद्दाहरूको जवाफमा हामीले सम्बन्धित काउन्टरमेसको अध्ययनलाई तीब्रता दिनुपर्दछ। ट्रम्प युगको दौरान, केही अमेरिकी कम्पनीहरूले हुआवेको विरूद्ध प्रतिबन्धनमा संलग्न थिए, र त्यहाँ एक निश्चित निष्क्रिय "कम्पोरेन्ट" थियो। चीनले हालसम्म ती कम्पनीहरूमा व्यापक प्रतिबन्धहरू गर्न लगाएको छैन। यद्यपि यो अवस्था लीसिस-फरर र प्रशस्त छैन। नयाँ अमेरिकी सरकारलाई वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने, यसले उद्यमको पक्षमा "सक्रिय" को पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। यदि आदानप्रदान चेन साँच्चै "हतियारको" छ "तब प्रकृति पूर्ण रूपमा फरक हुनेछ, र चीनले यसलाई कहिले जान दिनेछैन।
विश्वव्यापी आपूर्ति चेन, अर्ध-सार्वजनिक सामानहरूको रूपमा, सबैको संयुक्त निर्माण र मर्मतवारमा निर्भर गर्दछ। कालो भेडाहरूको बिरूद्धको रक्षा गर्न सम्पूर्ण शरीरको टुक्रिएको विन्डो प्रभावको कारण। वर्तमानमा, प्रसपालन भूमण्डलीकरणको आपूर्ति भूमण्डलीकरणको पर्याप्त क्षमताको संख्यामा छ, र निश्चितता यसको लाइफलिन हो। हालको "चिप अभाव" हदसम्म महामारीको महामारीको कारणले हो र ई -्गो अमेरिकी प्रविधि युद्धको कारणले। ग्राहकहरू विनियोजनको साथ संयोजन र आपूर्ति चेनमा असंतुलनमा बढाउनुहोस्। यस डोमिनो प्रभाव अझै यसको प्रारम्भिक चरणमा छ, र अर्को विकास आशावादी हुन गाह्रो छ। आज, वाशिंगटनको कार्यले यस अनिश्चिततालाई बढावा दिन्छ: आपूर्ति कुनै पनि समयमा काट्न सकिन्छ, र आपूर्ति चेन अझ अप्रत्याशित हुन्छ। यो भन्न सकिन्छ कि आपूर्तिको श्रृंखलामा अमेरिकी सरकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हो। यो एक पुरानो आक्रमण हो वा एक तीव्र प्रवाहको सबैभन्दा ठूलो सस्कोस भएको छ। एक मात्र निश्चितता यो हो कि अन्तमा कसैले पनि यसबाट लाभ उठाउनेछैन।